Izinto eziluncedo kuthi -Shenzhen Polymer Ibhetri CO., LTD
Ngokusekwe kwiimfuno zomthengi, iqela lobunjineli likhethe iiseli, zenza i-BMS, zapakisha iiseli, zaqhuba iimvavanyo. Siyanelisa abathengi bethu ngezisombululo eziphambili.
Ukupakishwa okwenziwe ngebhetri ngokweNokia / Samsung / Sanyo / Panasonic / Nokia ibhetri.100% Isiqinisekiso esiqinisekileyo.
Nceda unxibelelane nathi ngesilinganiso ESIMAHLA ngeeprojekthi zakho zokupakisha ibhetri.
Ukuhanjiswa kwangexesha: Kwi-PLM siyaqonda ukuba enye yezona zinto zibalulekileyo kubathengi bethu kukufika ngexesha. Siyikhathalele inkqubela yethu yokuhanjiswa kweyona nqanaba iphezulu.
Umgangatho ophezulu: Ukuqinisekisa iimveliso ezisemgangathweni ophambili yeyona nto iphambili kuthi. Esi sesona sizathu sisoloko sikhetha ukutyala imali kwizisombululo eziphezulu zobugcisa kwiziko lethu leR & D.
Iimveliso ezizodwa: Kubandakanya ibhanki yamandla ombane emhlabeni, i-PLM ibonelela ngeemveliso ezininzi ezigqibeleleyo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye neemfuno.
Inkonzo entle yabathengi: Enye inkxalabo ephindaphindayo abathengi bethu ababelana nathi sisidingo senkonzo yamava ethembekileyo kwaye siyayikhathalela nayiphi na imibuzo ngaphambi nasemva kwentengiso.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo kukho iinjineli ezingama-30 kwiqela le-PLM R & D kubandakanya i-5 PHD, i-10 MFD kunye ne-15 yeeBachelors. Malunga 30 unit imveliso oluzenzekelayo Izixhobo, i-25 nubit Isixhobo esizenzekelayo kunye nezixhobo ezi-8 zemigca yethu umzi-mveliso.